Apple Watch ayaa cabiri doonta garaaca wadnahaaga aan caadiga ahayn waxayna kugu wargalin doontaa. | Waxaan ka socdaa mac
Haddii aad leedahay Apple Watch, waxaad ka fikiri doontaa in shaqadani ay horey u haysatay Apple Watch-kaaga. Laakiin Apple waxay dooneysaa inay intaas ka sii dheeraato, oo daboosho wixii cilladaha ah ee aad la kulmi karto. Ka warqabka caafimaadka, ayaa bilaabay arjiga Daraasadda Wadnaha ee Apple. Iyadoo la adeegsanaayo tikniyoolajiyada 'ResearchKit' iyo dareeraha garaaca wadnaha ee Apple Watch, waxaan ku soo ururin karnaa xogta laxanka wadnaha aan caadiga ahayn. Isla codsigan ayaa mas'uul ka ah ogeysiinta isticmaaleyaasha inay la il daran yihiin xaalad aan caadi ahayn. Waxaa intaa dheer, haddii wax aan caadi ahayn la ogaado, waxaan helnaa la-talin bilaash ah oo lala yeelanayo dhakhtar iyo balastar EKG ah.
Waqtigan xaadirka ah waxaa kaliya laga heli karaa dukaanka barnaamijka Mareykanka ee loogu talagalay macaamiisha ka weyn 22 sano. Daraasaddan waxaa loogu talagalay dadka aan haysan wax cudur ah. Apple, daraasada waxaa hogaaminaya gacantiisa koowaad Jeff Williams, sarkaalka howlfulinta Apple, oo warbaahinta lahadlay:
Toddobaad kasta waxaan ka helnaa waraaqo la yaab leh oo ka yimaada macaamiisha oo ku saabsan sida ay Apple Watch u saamaysay noloshooda. Sheekooyinkaani waa kuwo na dhiirrigeliya waxaana naga go'an inaan wax badan ka qabanno sidii dadka looga caawin lahaa inay fahmaan caafimaadkooda… Wada-shaqeynta aan la leenahay bahda caafimaadka, kuma wargalin karno dadka xaaladaha caafimaad qaarkood, waxaan sidoo kale rajeyneynaa inaan horumarinno helitaanka sayniska ee wadnaha.
Waad ku mahadsan tahay dareemayaasha cagaaran ee iftiimiya boqollaal jeer Apple Watch-keena, wuxuu ogaadaa xaddiga dhiiga qulqulaya curcurka. Shaqadan, Apple wuxuu si dhow ula shaqeeyaa Jaamacadda Stanford. Hormuudka Iskuulka Caafimaadka ee Stanford wuxuu yiri:
Iyada oo Daraasadda Wadnaha ee Apple, Stanford Medicine faculty ayaa sahmin doonta sida tikniyoolajiyadda Apple Watch garaaca garaaca wadnaha ay gacan uga geysan karto keenista xilli cusub oo daryeel caafimaad firfircoon… Waxaan ku faraxsanahay inaan kala shaqeyno Apple daraasaddan kacaanka ee wadnaha.
Waxaan rajeyneynaa in Apple ay heshiisyo la gaarto bulshooyinka aan ka ahayn kuwa Mareykanka si ay ugu raaxaystaan ​​adeegga wax badan ku soo kordhin kara caafimaadkeena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple Watch ayaa cabiri doonta garaaca wadnahaaga aan caadiga ahayn waxayna kugu wargalin doontaa.